Translate German to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate German to Myanmar (Burmese), German to Myanmar (Burmese) translations, German to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
Hallo wie geht's dir မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
Ist da jemand? မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
Ich liebe dich wirklich sehr ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
Wie viel kostet dieser Hamburger? ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
Kannst du mir ein Taxi nennen? သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
Es tut mir leid ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး
Entschuldigen Sie တဆိတ်လောက်
ich bin interessiert ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို
Mein Flug hat sich verzögert အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
Ich bin geschäftlich hier ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
Hallo mein Name ist မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
Es tut mir leid, aber ich bin verheiratet ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
ich möchte Sie fragen ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
Kannst du mich zum Flughafen bringen? သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
Wie spät ist es jetzt? ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
Wo ist die nächste Polizeistation? အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
Kann ich bitte Ihr Handy-Ladegerät ausleihen? ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
Kannst du mir helfen? ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
Bestellen Sie mir bitte einen Drink? ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
Wie viel kostet es? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
Ich bin allergisch gegen Gluten ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
Rufen Sie einen Arzt an ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
Gibt es einen Arzt? ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
Kann ich anrufen? ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား?
Rufen Sie mich bitte Ihren Chef an. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
Dieser Ort ist sehr schön ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
Bring mich bitte zum Hotel ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
Wie ist meine Zimmernummer? အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?